Dowladda Somalia oo shaacisay in laga hortegay Qorshe Kenya dooneysay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Federaalka Soomaaliy ayaa mar kale kasoo saartay dagaalkii ka dhacay degmada Balad-xaawo ee Gobolka Gedo ee dhexmaray Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Ciidanka Maamulka Jubbaland.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda ayaa waxaa lagu caddeeyay in maleshiyo ay soo hubeysay Kenya ay weerar kusoo qaadeen degmada Balad-xaawo, hayeeshee weerarka ay iska difaaceen Ciidanka dowladda.
Dowladda ayaa sheegay in qorshaha Kenya weerarkaas kusoo qaaday uu ahaa mid ay ku dooneysay inay si toos ah ugu maamusho qeyb kamid ah dalka Soomaaliya, taasina ay meel ku dhacday ku tahay Madax banaanida dalka.
“Waxaa si geesinimo iyo wadaninimo ku jirto weerarkaas uga hortagay Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya, waxaana halkaas ku beenoobay gardarradii iyuo damaacigii qaawanaa ee Dowladda Kenya ay ku doonaysay inay si aan toos ahayn u maamusho qayba ka mid ah dalka Soomaaliya” ayaa lagu yiri Qoraalka dowladda.
Sidoo kale waxaa intaas lagu sii daray Qoraalka Xukuumadda Muqdisho “Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay cambaaraynaysaa isku daygaan fashilmay oo ay dabada ka wadday, soona qorshaysay Dowladda Kenya. Isku dayada noocaan oo kale ah waxay kasoo horjeedaan nabad ku wada noolaanshaha waddamada deriska ah iyo sharciga adduunka labadaba. Waxay sidoo kale dhaawacayaan xornimada, midnimada iyo qaranimada”.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkii ka dhacay Balad-xaawo ee Gobolka Gedo ee dhexmaray Ciidanka dowladda Federaalka iyo kuwa Jubbaland, waxaana dowladda sheegtay in Ciidankaas ay ahaayeen Jabhad hubeysan.